Tsy Ny Mpampianatra Rehetra No Voasolo Tena Tamin’ireo Hetsi-panoherana Mahery Vaikan’ny Sedikà Tao Meksika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Aogositra 2016 15:22 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, русский, عربي, Español
Mendri-pideràna ny asa fampianarana ny hafa, indrindra fa ny tanora, mba hahay mampiasa ny fitaovana izay ahazoana fahalalàna. Any amin'ny firenena toa an'i Meksika, izay “tsy marim-pototra sy ratsy” ny fivoarana ara-panabeazana, araka ny voalazan'ny Fikambanana ho Fiaraha-miasa Ara-toe-karena sy Fampandrosoana, dia matetika tsy ahitana vokatra ny ezaka sy ny fikelezana aina isan'andro ataon'ireo mpampianatra ao an-dakilasiny.
Natombokay tamin'i Gabriel Páramo, profesora izay mampianatra ireo mpianatra ao amin'ny dingana voalohany nandritra ny 21 taona, tao amin'ny Sekoly fianarana ho mpanao gazety ao Carlos Septién García any Mexico City ny 16 taona tamin'ireo. Nanontanianay azy indrindra ny resaka manodidina ny CNTE sy ny zavatra takian-dry zareo amin'ny governemanta.
GP: Ny CNTE sy ny syndikà nasionalin'ny mpiasan'ny Fanabeazana (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) dia samy sendikà niasa ho modelin'ny vondrona miaro ny tombotsoan‘ny fanjakana Meksikana nandritra ny taona maro.
Ny faharavan'ny Antoko Revolisionera najoron'ny andrim-panjakana- (Institutional Revolution Party) [tamin'ny 2000] niaraka tamin-dry Vicente Fox sy Felipe Calderón [ Filohan'i Meksika tamin'ny 2000-2006, 2006-2012] no nampigoragora ny fifandraisan'ireo sendikà voalaza teo aloha ireo sy ny governemanta. Rehefa tafaverina teo amin'ny fitondrana ny Institutional Revolutionary Party dia fantany fa tsy ho voafehiny intsony ny sendikà — io no niandohan'ilay fifanolanana.
Tsara ho marihana fa tamin'ny fiandohan'ny taona 2013, voadoana mafy ny iray amin'ireo vondrona sendikaly voalaza eo ambony ireo, tamin'ny fisamborana an'i Elba Esther “La Maestra” (Ilay mpampianatra) GordilloIt, izay nitarika ny Sendikà Nasionalin'ny Mpiasan'ny Fanabeazana ary miatrika fiampangana momba ny famotsiam-bola sy fikambanan-jiolahy, amin'izao fotoana izao.
Mba ahazoana hevitra maro momba io resaka io dia niresaka tamin'i Laura Martín (@laumartinm ao amin'ny Twitter) izahay. Mampianatra kilasy ambaratonga samihafa ao aminà Oniversite iray tsy miankina izy.
LM: Tena malahelo sy miahiahy noho irey hetsika ireny izy. Nandritra ny 40 taona no nanolorany tena ho mpampianatra. Ny fampianarana ny ankizy miaina anaty fahantrana lalina tany amin'ny toerana fanariam-pako, tany amin'ny faritr'i Santa Fe izay efa nivoatra amin'izao fotoan izao, no nanombohany nampianatra. Tsy mbola namela ny kilasiny tamin'ny fandehanana migrevy izy sady vonona mandrakariva hiatrika ireo fanadinana izay nahafahany nisondrotra tamin'ny asa fampianarany.
LM: Inona no ao ambadiky ny tombotsoan'ireo mpitarika sendikaly ? Moa ve misy zavatra amboniny ny tsy fanekeny ny fanavaozana ny fanabeazana ? Nahoana no manatevina laharana ilay hetsika ireo vondrona tsy misy ifandraisany amin'ny fanabeazana.
#Mpampianatra tonga lafatra miatrika ny #TombanEzaka ao amin'ny Foiben'ny Fampirantiana #Tlaxcala #MinoIreoMpampianatraAho